မိန်းမဟူသည်… ” Wife = TV –။– Girlfriend = Handphone” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မိန်းမဟူသည်… ” Wife = TV –။– Girlfriend = Handphone”
မိန်းမဟူသည်… ” Wife = TV –။– Girlfriend = Handphone”
- ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Jan 17, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 29 comments
မြန်မာ ပုရိသယောက်ျားတို့ ပြောကြတာရှိသည်
မပေါင်းလဲခက်၊ ပေါင်းလည်းခက်၏ .. တဲ့။
အခုတော့ ခေတ်နဲ့အညီ တမျိုးပြောင်း ပြောနေကြပြန်ပြီ။
မိန်းမဟူသည် တီဗီ (သို့မဟုတ်) လက်ကိုင်ဖုန်း နှင့် တူ၏.. တဲ့
အိမ်သူဇနီးမယားသည် ဧည့်ခန်းထဲက တယ်လီဗီးရှင်းနဲ့တူပြီး မိန်းခလေးမိတ်ဆွေ (စမောလေး)က ဟန်းဖုန်းနဲ့ တူသတဲ့ဗျာ..။
ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေ အိမ်မှာ တီဗွီ ကြည့်ပြီး အပြင်သွားရင် ဟန်းဖုန်းလေး ဆောင်သွားကြတယ်လေ။
ပိုက်ဆံမရှိ ပြတ်လပ်နေချိန် အခန်းအောင်း တီဗွီကြည့်နေပြီး ငွေယားလေးအဆင်ပြေတော့ ဟန်းဖုန်းလေး အသစ်လဲကိုင်တတ်ကြပြန်ရော။
တီဗွီကို တစ်ခါတရံမှ ကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် ဟန်းဖုန်းကိုမူ အမြဲတမ်းကလိနေကြရဲ့။..
ခင်ဗျားတို့ အိမ်က တီဗွီဟာ တစ်သက်လုံး အလကားကြည့်ခွင့်ရှိပေမယ့်လို့ ..
ဟန်းဖုန်းမှာမူ ဝန်ဆောင်ခမပေးလို့ကတော့ လိုင်းဖြတ်ခံရပြီသာ မှတ်ပေရော့ဗျို့…
…… …… …..
(7-days ဂျာနယ်ပါ ဟာသတစ်ခုကို ပြန်လည် ခံစား ရေးဖွဲ့မိပါသည်)
About ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ
ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ has written 71 post in this Website..
နတ္ထိတွေ အစာသွပ်ထားတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲ ၀မ်းစာကလည်း ရှားပါးလို့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ငူငေါင်ငေါင်ရပ်ရင်း လှမ်းမျှော်ပြီးကြည့်တော့ အနာဂတ်ဟာ မှုန်ဝါးလို့နေရဲ့.. မထူးဇာတ်ခင်းကာ အတိတ်က အိပ်မက်တွေကို ပြန်တူးကြည့်တော့ ပုပ်သင်ဥတွေပဲ ထွက်လာတယ်.... CJ # 7202011
View all posts by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ →
ကျုပ်က ဒီလို တင်စားမယ်ဗျာ………..
အိမ်သူသက်ထားဇနီးမယားသည် …….. အိမ်တွင်ချက်သောထမင်းနှင့် တူ၍
ငရုပ်ဆီ အရွှဲသားဖြင့် လမ်းဘေးတွင်စားရသော ဝက်သားဒုတ်ထိုးကဲ့ သို့ လည်းကောင်း…..
ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ရှောက်သီးသုပ်ကဲ့ သို့ လည်းကောင်း……….
ဒူးရင်းသီးနှင့်ပဲငပိ ရောစားသကဲ့ သို့ လည်းကောင်းးးးးးးးးးး
အစားမတော်ပါက ရောဂါဘယများ၍ အသက်ပါဆုံးနိုင်သဖြင့် ……..
အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းသာလျှင် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး ……ဟု
ဤစာအား အိမ်မှမဒမ် ဖတ်နေနိုင်ပါသဖြင့် 
ထမင်းကို ဗိုက်ဆာသော အချိန်တွေသာ သတိရ၍ ဝက်သားဒုတ်ထိုး တို့ ရှောက်သီးသုတ်တို့၊ ဒူးရင်းသီးတို့ကို မြင်တိုင်း အချိန်မရွေး စားချင်ပါသည်။
ယှဉ်စားဖူးသူမှ အရသာဘယ်လိုရှိ အန္တရာယ်ဘယ်လိုထိ သိတာကို အူးဆာမိရဲ့..ွေိခွိ
ထမင်းဆိုတာ နိစ္စဓူဝ ဝတ္တရားအရ စားကြပြီး
သရေစာ ချို ချဉ် စပ် ကလေးများကိုဖြင့် ဆာလည်းစား မဆာလည်းစား မြင်တိုင်းစားချင်ကြလေ၏
မဒမ်ဆာမိ လဲ ရွာကိုဝင်ဝင်နေတာ။
ကောင်းလေ့လေ့ ကဆာမိရေ့။ (Cr- ကဆာမိ)
အင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးစာမိကြီးကိုတော့ လေးစားသွားပြီနော်။
တော်တော်တော်တဲ့ တော်တို့တွေ ပဲ ..
အိမ်က တီဗွီ ကို တစ်သက်လုံး အလကားကြည့်ခွင့်ချင်ရင် အမြဲသစ်နေအောင်တော့ထားမှ ပေါ့ ….
ဟန်းဖုန်းကလဲ ၀န်ဆောင်မှုမပေးရတဲ့အလကားရမယ့် ဟန်းဖုန်းကိုသုံးပေါ့အေ ..
ဒါမှ ကလိချင်သလိုကလိ လိုင်းဖြတ်မခံရမှာ …
ဘယ်နားမှာ ရနိုင်မရဲ ဟင်….
ဟောဒီမယ်ဗျို့ ဦးလေး မင်းနံဒါ တစ်ယောက် ဟန်းဖုန်းကိုင်ချင်လို့တဲ့ အန်တီရှင်မွေးလွန်းရေ
အင်း.. ငါအိမ်မှာ တီဗွီကြည့်နေတယ်..
ဘာရယ်.. မင်းပြောတာ မရှင်းဘူး..
ဒီမှာ တီဗွီဇာတ်လမ်းက ကောင်းခန်းရောက်နေဘီ..။
ဟူး လိုင်းကမကောင်းတာလား ဟန်းဆက်က မကောင်းတာလား
နောက်တစ်လုံး အသစ်လဲလိုက်တာ ကောင်းမယ်
တီဗွီနဲ့ကျ ကိုယ့်ဖက်က ဘာမှပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူး
အဲ့…ဖုန်းကျတော့ ကိုယ်ကပြောချင်တာပြောလိုက်၊ ကိုယ်ပြောတာ သူကတုန့်ပြန်လိုက်
ရေငုံနှုတ်ပိတ် ဘာမှပြန်ပြောခွင့်မရှိတာ တီဗွီပါ
ဝန်ဆောင်ခပေးနေသမျှ ပြောချင်တာပြော ကလိချင်သလို ကလိ အပြန်အလှန်ရှိတာ စပွန်ဆာ.. အဲ အဲ ဟန်းဖုန်း
တော်တို့တွေ.. တတ်လဲတတ်နိုင်ပ… တွေးလည်း တွေးတတ်ပတော်……
တီဗွီ ကို အထင်သေးလား။
ဟန်းဖုန်း ကမှ Pay as you go လုပ်လို့ရသေး။
တီဗွီ က ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့် လစဉ် လိုင်စင်ကြေး ပေးရပါတယ်။
လစဉ်ကြေးပေါ် မူတည်ပြီး တီဗွီ မှာလဲ ဆားဗစ် ကွာပါ့။
3D သုံးဒီ က မင်းရို့ ဟန်းဖုန်း နဲ့ ကြည့်လို့ အရသေးဝူး။
နောက်ပြီး တီဗွီ မှာ အင်တာနက်ချိတ်လို့ ရတဲ့ ခေတ် ဖစ်နေပါပြီလေ။
ဂဇက်ရွာက စာတွေကို TV ပေါ်မှာ ပြူးပြူးကြီး ဖတ်လို့ ရပါတယ်ကွဲ့။
ဟန်းဖုန်း Screen သေးသေးလေးကနေချောင်းဖတ်စရာမလိုပါ။
အိမ်က တီဗွီကြီးလည်း လစာရသမျှ လိုင်စင်ကြေးပေးနေတဲ့ကြားက
ကားစီးချင်တယ်၊ အဲယားကွန်း အိပ်ခန်းမှာ တပ်ပေးအုန်း
ကလေးအလုပ်တွေနဲ့မို့ အရင်လို ဆားဗစ်မပေးနိုင်တော့ဘူး ဖြစ်လာဘီ
စခရင်သေးချင်သေးပါစေ.. ဟန်းဖုန်းလေးပဲ ချောင်းဖတ်လိုက် ခိုးကလိလိုက် လုပ်ရင်ကောင်းမလား
အဲဒီလိုဆို တီဗီလည်းမကြည့် ဟန်းဖုန်းလည်း မကလိတဲ့ လူပြိုကြီးတွေ ကျတော့ရော။ ကိုဆာမိ ပြောသလိုဆို အဲဒီလူတွေက အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းလည်းမစား ဝက်သားဒုတ်ထိုးတို့ ဘာတို့မစားတဲ့ မီးလွတ်စားသူတွေပေါ့။
တီဗွီမကြည့် ဟန်းဖုန်း မ ကလိတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း ရှိပါ့ဗျား
အချိန်မှန် တုံးခေါက်ပေးပြီး ဆွမ်းကပ်မည့် ရိပ်သာ များစွာ ရှိပါကြောင်း
ပုံမှန်စား ပုံမှန် တရားမှတ် ပုံမှန် အိပ်နိုင်ပါကြောင်း
မိန်းမဟူဘိ … ထို အိပ်ထိ ကား……… လို့ဆိုတော့
အိပ်မှ ထိရတာပေါ့နော် :harr:
TV လည်း ကြည့်ချင်ဒိုင်း
ကြည့်လို့ ရဒယ် မှတ်နေဒလား …
သူ့ကို ဖွင့်လို့ရဒဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချိမှနော် ..
ဘာမှတ်နေလဲ … ငွင်းးး ငွင်းးး
ဖုန်းလည်း အားချိမှ သုံးလို့ ရဒါ …
အားမချိရင် ဘက်ထရီ Low ဆိုဒါလေးဘဲ ပြပြပျီး ပိတ်တွားဒတ်ဒါ …
အဓိက ဟာ “အား” ဘဲလို့ ဆိုဂျင်ဘာဒယ် ..
TV က လေးလုံး
မိုဘိုင်းက တစ်ထောင်အထက် ကွယ့် :mrgreen
အခုတော့ ပြောဘီပေါ့ တီဗွီ တဲ့
(၁) အမိစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၂) အဘစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၃) အမိ အဘစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၄) မောင်ကြီးမောင်ငယ် စောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၅) အစ်မ ညီမ စောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ၊ (၆) ဆွေမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့ မိန်းမ၊ (၇) အနွယ်တူစောင့် ရှောက်တဲ့ မိန်းမ၊ (၈) တရားကျင့်သုံးဖက် စောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမ။ (ဒီမိန်းမရှစ်မျိုးက ကာမပိုင်မရှိတဲ့ အပျိုစဉ်မိန်းမများဖြစ်ပါတယ်။) (၉) စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးမိန်းမ၊ (၁၀) လက်မထပ်ရန် မင်းအမိန့်အာဏာဖြင့် တားမြစ်ထားတဲ့မိန်းမ၊ (၁၁) ဥစ္စာဖြင့်ဝယ်ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၂) ယောင်္ကားတစ်ဦးဦးနဲ့ အလိုတူ၍ အတူနေတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၃) စည်းစိမ်ပေးပြီး မယားပြုလုပ်ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၄) အ၀တ်ပုဆိုးပေးပြီး မယားပြု ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၅) ရွှေခွက်မှာ လက်စုံချပြီး ယောင်္ကျားနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၆) ခေါင်းရွက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့ မိန်းမကို ခေါင်းမရွက်စေဘဲ သိမ်းယူထားတဲ့ မိန်းမ၊ (၁၇) ကျွန်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်တဲ့ မိန်းမ၊ (၁၈) အမှုလုပ်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်တဲ့ မိန်းမ၊ (၁၉) စစ်မြေမှ ဆောင်ခဲ့တဲ့ သုံ့ပန်းမိန်းမ၊ (၂၀) တစ်ဦးဦးရဲ့ ခေတ္တမယားဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမ
၄ စား၊ ၅ ပြန်၊ ၆ လျော်လိုက်ပေတော့
ဘဝနဲ့ရင်းပြီး သိလာခဲ့တာတွေပေါ့ မွန်ကစ်ရယ်
အိပ်မှထိ သလား၊ မအိပ်ဘဲထိ သလား မိမိ ဇ’ နဲ့ အစွမ်းအစပေါ် မူတည်ပါကြောင်း
အားမရှိလို့ တီဗွီလည်းမကြည့် ဟန်းဖုန်းလည်း မကလိတော့ဘဲ ငှက်ပျောတုံးပဲ ဖက်တော့မည့်သူ စာရင်းက အမြန်လွတ်ဖို့ “အား” “စု” လိုက်ပါအုံး..
အားစု ထားတဲ့ သူတွေကတော့ တီဗွီလေးလုံး ဟန်းဖုန်းအလုံးတစ်ထောင်တောင်ကိုင်သတဲ့
အံဇာတို့၊ မောင်ပေတို့ကို ခွဲပေးလိုက်ပါအုံးလား.. ဟီး
ဟုတ်တယ်.. တီဗွီကြီး အခု ဗိုက်ဖောင်းနေတယ်… ပါးပါးလှပ်လှပ် ဟန်းဖုန်းလေးပဲ ပွတ်မလားလို့
သူကြီးပြောမှ ရှောင်စရာတွေ များလှ.. ကျန်မှ ကျန်ပါအုံးမလား
၁၁။ ၁၃၊ ၂၀ မိန်းမတွေက ခေတ်စကားနဲ့ ဘယ်လိုကွာမလဲ မသိ
တီဗွီကြီး ပြေးပိတ်လိုက်အုံး.. အားကုန် နေမှာစိုးလို့
မိန်းမဟူသည် ဆိုလို့.. ယောကျားယူသည် ဆိုပြီး ပိုစ်တင်ပေးရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်..
မယူခင် ချစ်သူ ဘ၀ တုန်းကတော့ လက်ပက်နာရီလေးလို ကိုယ်နဲ့ မကွာ ထားချင်တယ်။
ယူပြီးခါစ မှာတော့ အိပ်ယာဘေးမှာ ထားတဲ့ စားပွဲတင် နာရီလေးပေါ့.. အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ကြည့်ရတယ်။ အိပ်ခန်းထဲမှာ အမြဲ ရှိသင့်တဲ့ အရာပေါ့
ယူပြီး ၁နှစ်လောက်ကြာတဲ့ အခါ.. အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲမှာ ချိတ်ထားတဲ့ သံစုံနာရီကြီးပေါ့.. တခါတရံ နားငြီးပြီး အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ အတွက် ဟန်ပန် အပြည့် ရှိတဲ့ နာရီကြီး.. အိမ်ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် နာရီကြီးပေါ့..
ယူပြီး တော်တော် တော်တော် ကြာသွားတဲ့ အခါ.. မြို့လည်ခေါင်က နာရီစင်ကြီးလိုပေါ့.. ဘယ်သူ ကြည့်ကြည့် ဂရုကို မစိုက်တော့ဘူး။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် နေပူမိုးရွာ လမ်းလယ်ခေါင်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ နာရီကြီး ဖြစ်သွားပါသတဲ့.. လမ်းလယ်ခေါင် မှာ အသံစုံ ထွက်နေလည်း ကြားချင်မှ ကြားတော့မှာပေါ့ကွယ်။
ယောက်ျား ဟူဘိ ထိုပူရိကား
ကျုပ်လည်း ဘာလိုလိုနဲ့ ဧည့်ခန်းထဲက သံစုံနာရီဘဝ ရောက်နေပါပေါ့
ယောကျားတွေက မိန်းမတွေ ကို နာရီ လို သဘောထားတယ် ပြောချင်တာ.. ကိုရွာစားရေ..
ယူပြီး ကြာလာတော့ တမျိုး.. အဲ့လိုပုံစံနဲ့ ဆက်ဆံ ကြတာ ကို ပြောချင်တာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းလေး ညက ဟာသရုပ်စုံ မှာ လာသဗျ …
ဟာသရုပ်စုံ ကတောင် အင်တာနက်က ဇာတ်လမ်းယူတယ်ဆိုပဲ …
ဟန်းဖုန်း ကြည့်တာလဲ သေချာကြည့်နော် … ဗိုင်းရပ်စ် ကိုက်သွားမယ်တဲ့ ..
အိမ်က တီဗွီကတော့ ဗိုင်းရပ်စ် မကိုက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ .. :harr:
နောက်တစ်လုံး အသစ်လဲတာပေါ့လို့ ဟိ